तपाईं कहिल्यै विमान चढ्नु भएको छ? विमान भित्र के के समस्या आउछन - IAUA
तपाईं कहिल्यै विमान चढ्नु भएको छ? विमान भित्र के के समस्या आउछन
ramkrishna October 25, 2017	तपाईं कहिल्यै विमान चढ्नु भएको छ? विमान भित्र के के समस्या आउछन
२०७४-काठमाडौंदेखि लुक्लासम्मको उडान अवधि २५ मिनेट मात्रै हो। तर, १९ जना यात्रु ‘बोर्डिङ’ गरिएको जहाजले काठमाडौं विमानस्थलको ‘डमेस्टिक पार्किङ’ मा १ घण्टा ४५ मिनेटसम्म उड्ने पालो कुरेर बस्दा के दुर्गति हुन्छ होला? दुर्गम भेगमा १९ सिटे डोर्नियर विमान उडाउने पाइलट क्याप्टेन रवीन्द्र डंगोल यस्तो पीडाका भुक्तभोगी हुन्। जहाज ‘स्टार्ट–अप’ गर्नेदेखि लिएर उड्ने अनुमतिसम्म दिने अधिकार भएका ‘एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर’ (एटीसी) बाट घण्टौंसम्म पालोका लागि अनुमति (क्लियरेन्स) नपाएको कैयन तीता सम्झना छन् उनीसँग।
एउटा मात्र धावनमार्ग, सीमित पार्किङ वे, साँघुरो पूर्वाधारमा थपिँदो उडान चापले उचित व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। विमानस्थलको उडान सञ्चालन विभागका प्रमुख सुधीरकुमार चौधरीका अनुसार, क्षमताभन्दा बढी जहाज व्यवस्थापन गर्नुपर्दा एटीसीलाई तनाव हुन्छ। यस्तो अवस्था आउनु भनेको सम्भावित दुर्घटनाको खतरा हो। यति संवेदनशील विषयमा नीति निर्माताले नजरअन्दाज नगरेकै जाति।nayabato.com
Previous Previous post: तपाईका बच्चाहरु पनि अन्धा बनाउदै त हुनुहुन्न विवाहित हुनुहुन्छ बच्चा छन अवस्य पढ्नुहोस्
Next Next post: धनि बन्न के के गर्नु पर्छ ?